Hein Htet Zan
MMS One Stop IT Solutions
+959 250 152 018
© KoHtet 2020.
Ko Htet .
JS, PHP, Kotlin, Dart စသည့် Programming Language များကို အသုံးပြုပြီး Web, Android & ios app များကိုရေးသားဖန်တီးသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ MMS IT မှာ Programming ပညာရပ်များကို တာဝန်ယူ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိသော ထူးချွန်ဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ပညာသင်နှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်း၊ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာလိုသဖြင့် Diploma In Electronic ကို Glory နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းတွင် စတင်တက်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
Diploma သင်တန်းတက်ရင်းအားလက်ချိန်များမှာ computer A +, NE, နှင့် microsoft certificate သင်တန်းများကိုတက်ရောက်လေ့လာခွင့်ရသဖြင့် computer ပညာရပ်များကို လေ့လာရန်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါတယ်။
Jan 2014 - April 2015
သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ
အလုပ် လုပ်ရင်း Programming ကိုအရှိန်ပါပါ လုပ်ဖြစ်လာတော့ လုပ်နေတာတွေရပ် Programming ဘက်ကိုပဲ စုန်ပြစ်ဝင်ခဲ့တာ သွားလည်းဒီစိတ်၊ စားလည်းဒီစိတ်၊ ဖြင့် Programming ကိုသာတစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဖြစ်လာခဲပါတော့သည်။
MiMBER Institude of Management
Member Point Service
Angel Mobile Myawaddy
Exam Test System
“ ခေတ်နဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေ ဖန်တီး တီထွင်နိုင်စွမ်းတွေကြောင့် အားကိုး ယုံကြည်ရတဲ့ နည်းပညာအဖွဲအစည်းတစ်ခုပါ .....
“သူ့လက်ရာ သူ့အရည်အချင်းကို သဘောကျတာနဲ့ Brain Box Acumen ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သူ့ကို အပ်လိုက်တယ်။ သူ့ကို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူဘာတွေ လုပ်လိုက်တယ်တော့ မသိဘူး။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ကို ပြတော့ "ကြိုက်တယ်" လေ..။ အမြဲတစေ လေ့လာနေတဲ့လူငယ်တွေပါ .....
Brainbox Acumen School of Management
“ နည်းပညာနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျုပ်တို့လိုလူတွေအတွက် လုပ်ငန်းအတွက် software ရေးပြီး စိတ်ကူးရှိတိုင်းပုံဖော်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးတဲ့ IT လုပ်ငန်းလေးဖြစ်လို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် .....
Seven San Real Estate
No 202, Daw Kyi Kyi Stree, Ngar Htet Gyi